Kooxda Horseed oo ku guulaysatay koobka Jeneraal Daa'uud+Sawirro
Thursday December 17, 2015 - 09:01:56 in Xiriirka Kubadda Cagta by Nocsom Editor
Kooxda Kubbadda cagta Horseed ayaa galabta ku guulaystay koobka Jeraal Daa'uud kadib marki ay ka adkaatay kooxda Heegan kulanki ugu horeeyay koobka oo si toos ah loo daawado.
Cayaartan oo ka dhacday garoonka Banaadir waxaa u soo daawasho tagay masuuliyiin ka socotay Wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga , Guddiga Olombikada , Madaxda Ciidamada Xooga iyo booliska iyo taageraayaal badan oo garoonka Soo buux dhaafshay .
Kooxda Booliska Heegan ayaa goolka ku hormartay waxaana bilowga hore ee cayaarta u dhaliyay Deeqa cabdullahi Nuur ( Deeq Aaryo), waxaana Horseed goolka ka sukow dhib kale u noqday markii kaarka casaanka laga siiyay Robert Karetithi Meme oo qalad ku galay Mahad Muxudiin Xaaji oo Heegan dhexda uga cayaara waxana qaybat hore lagu kala nastay 1-0.
Marki Laysku soo laabtay Horseed aya soo bandhigtay cayaarmuujinaysa in uusan cayaaryahan ka maqnayn waxaana goolka barbahaha u dhaliyay Caddaani barre Ciise, waxaana goolka labaad oo si qurux badan u dhaliyay Daniel Matengo oo No-9 u qaata Horseed., waxdayna cayaarta kuso gebagebowday 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Horseed.
Marki ay cayaarta soo idlaatay waxaa halkaas lagu la bixiyay abaalmarinada kaalmhamahore . Horseed oo kaalinata koowaad gashay ayaa heshay Shillin soomaali 45,000,000 , Heegan oo kaalinta labad gashay ayaa la siisay Sh. Soomali 25,000,000 . MIlyan
Horseed aya koobkan hanatay 32 sano kadib waxaana marka ay ka qaaday kooxda Jeenyo sanadii 1983 , waana koobkii lixaad ee koobka Jeneraal Daa'uud oo hanato.